SingForYou.net - achitsonethu's Channel
achitsonethu 's Channel
Contest Winner fill credit
End date: 02/09/2011
Last Login: 05-12-2015 13:01
Channel Views: 55,905
အလွမ်းဆိုတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ အချိန်တိုင်းပြည့်နေ့သူrnအလွမ်းရင်ခုန်သံတွေမခံစားနိုင်လို့ rnဟိုးအဝေးက တစ်ယောက်တည်းသူရယ် rnတကယ်တော့အလွမ်းဆိုတဲ့ပြဇာတ်မှာပါနေခဲ့သူပါrnရူးလောက်လောက်ချစ်သလို ရူးလောက်အောင်လည်းလွမ်းတယ်..
Hobbies football,guitarရ&dance ..badminton,basketball,
Movies & Shows hip hop!!rncamp rock rnhigh school musical 1 to3and<brnlike to c disney channel :D
Music BayGyi - YanYan
saimoethiha on May 7, 2013
nlsalin on Nov 17, 2012
jii on Sep 26, 2012
very good tal
kawthoolaystar on Aug 21, 2012
Just checking because of your lovely voice.
broken007 on Apr 11, 2012
the gold soung.very good
hlawinaung11111 on Sep 19, 2011
ကောင်းတယ် ကောင်း တယ် ဆက်ကြိုးစားပါ .............များများတင်ထာပါ
yatsattatthu on Aug 19, 2011
အသံကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ညီမလေး... အဆင်ပြေလား.... အဆင်ပြေရင်... လက်ခုပ်သံကြားချင်တယ်... အဟွတ်..
aung80 on Aug 19, 2011
music-rocker on Aug 6, 2011
မမခြူး မာမီဇင် လာအားပေးတယ် သီချင်းလေးတွေက ကောင်းပါတယ်ဗျာ အဲ့ရှင့်
sweet86 on Jul 17, 2011
hninpwint89 on Jul 7, 2011
အချစ်ကိုသိချိန်သီချင်းလေးကိုနားထောင်လိုက်မှပဲ တစ်ယောက်သောသူကိုတကယ်ချစ်နေမိမှန်းသိသွားတယ် စစ်ရေ အ၇မ်းကောင်းတယ်
laylwintthu on Jul 6, 2011
ချစ်ညီမလေးရေ နှုတ်ဆက်သီချင်းလေးကြောင့် စိတ်မကောင်းဖစ်ပီး လွမ်းသွားလို့ အိမ်လေးထိလာလည်ရင်းး ညီမလေးပြန်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေမယ်နော်... သတိရနေမယ် ညီမလေးပျော်ရွှင်ပါစေနော်.. ❤
moethauk on Jun 29, 2011
rhymeb on Jun 15, 2011
ကြယ်စုတ်လေး ... သီချင်းတွေကို နားထောင်ယုံတင်ဟုတ်ဘူး ... ဒေါင်းပါဒေါင်းပစ်လိုက်တယ် ... ဟိဟိ .... ၀ိုင်းစု သီချင်း မဆိုတော့ဘူးဆိုရင် နင်နဲ့ငါသေခန်းပြတ်ပဲ ....
YoteSoeLaye on Jun 13, 2011
ပြန်လာချောင်း...ဟုတ်ပေါင်..ယောင်လို. ။ဟီဟိ...ခြူးသံလေးကိုချစ်လို. လာလည်တာ...ဘူမှလည်းရှိဝူးးးးး ငှက်ကလေးကလည်း တစ်ကောင်တည်းး တနားပါဒယ်...နောက်တစ်ခေါက်လာလည်ရင် နှစ်ကောင်မြင်ချင်ဒယ်...ဒါပဲ...နှစ်ကောင် မမြင်ရရင် ခြူးကိုချစ်တော့ဝူးးးးးဟီဟိဟဟဟဟဟဟ
moethuzar on Jun 5, 2011
lar lal twar tal naw , athan cho cho lay ne nar htaung lo kaung lo arr pay nay mal
လာလာလည်သွား၏ ။ သီချင်းများကို ပျော်ရွှင်စွာ နားဆင်သွား၏ ။ တာ့တာ :D
cutemyo1 on Jun 1, 2011
MAYTHINGAN on Jun 1, 2011
raymond_83 on Jun 1, 2011
U ve been so kind n listened my songs.thank u......U r suchagreat musician...wow
shweyoe on May 31, 2011
အဲ နာမည်ခေါ်ရမှာ တညိုးကြီးမို့၊ အန်တီရေ တား လာလည် တွားလယ်နော် ~~~
auricoman on May 31, 2011
atan cho cho lay nae sis yay... lar lae twer tal naw!song tway ko le' nerr sin arr pay twer par tal naw! :)
Maylay94 on May 28, 2011
စစ်အသံလေးက အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်~~အရမ်းလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ~~စစ်ဆီကို မေလေးလာလည်ပီး စစ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေကို အားပေးနားဆင်တွားပါတယ်ရှင့်~~း)
lovememore on May 27, 2011
saungnge on May 27, 2011
လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးပါပဲ ညီမလေးခြူးရေ .... ခြူးရဲ့ အသံလေးလဲ အရမ်း ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့စတိုင်လေး တွေက ချစ်စရာလေး.... ဆောင်းငယ် အမြဲတမ်း အားပေးနေမယ်နော်...=)
natkhatsoe88 on May 26, 2011
လာလည်သွားပါတယ်နော်... အားပေးနားဆင် သွားပါတယ်...
decemberdream on May 19, 2011
mon23 on May 13, 2011
လာနားထောင်သွားတယ် .. အသံလေးကောင်းတယ် :)
YwarTharLay-PDW on Mar 31, 2011
Miz ya..... painfully.. can't hold on...rn....GuD LuCk.......:) :-* ဗျဲဗျဲ
Blade on Mar 19, 2011
wow..chittuma lay~ gud cial gyi gr8 stuffsssssssssssss m/
nofretete on Mar 15, 2011
cloudlyblue on Feb 18, 2011
မအလွမ်း လာလည်သွားတယ်နော်rn သီချင်းသံလေး နားထောင်ချင်လို့ ဘယ်မှာနားထောင်ရမလဲမသိဖူး ကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပီးတော့ သီဆိုထားတဲ့ သံစဉ်တေးလေးတွေကို နောက်များမှာ အခါအခွင့်ကြုံရင် နားထောင်ချင်ပါသေးတယ် ......
saunghninmoe528 on Feb 18, 2011
sis lay yay lar lel thwar par tal shint... rnchin twar arr nar sin twar par dal shin..........
smillingstar on Dec 16, 2010
susu23 on Dec 16, 2010
sis chulay yay... ma ma susu lel alae lar thwar par tal..chit sa yar kg tae atan nae thi xo htar tae tachin tway koayan like tal kwal........
4eva5exy on Dec 7, 2010
song lay ko listen yin lar lel thwar tal naw...
paohlay on Dec 6, 2010
come and visit to your channel..
Lovekgmalay on Dec 4, 2010
Lar twar del naw ... :D Ayan ayan ko miz ya
nyoemadi on Dec 3, 2010
It's great channel
luphyu4 on Nov 20, 2010
nyimalaykoko on Nov 10, 2010
moehtetsoe on Nov 2, 2010
yannge on Oct 29, 2010
chithtun on Oct 18, 2010
zawkolay on Oct 12, 2010
awayvisitor on Oct 11, 2010
marnaminther on Oct 9, 2010
zaw-khaing on Sep 30, 2010
lar lal thwar tel nor sis lay yea,. thi chin lay twea set so par own nor, Arr pay pa mal< Khin tae, zaw-khaing:
melvinvampire on Sep 8, 2010
u ya song mother will scold u by nan su ya ta ti so.. kg tha naw..ma so bar bu kawr. u ya song tweamyar gyi ba naw. although myar bin mat sing omg po.. singer phyit9lo pyaw thar naw.. firend. u ya song twe ko 1comment+5stars..
MyintMoAung on Aug 18, 2010
htunhtun1500 on Aug 7, 2010
လာလည်တယ်နော် ..မင်းသီချင်းဆိုတာ အရမ်းကောင်းတယ် ။။။အမြဲလိုလို နားထောင်ဖြစ်တယ် ...
MyuKhoe on Aug 5, 2010
အလွမ်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးရေ..လည်လည် လာသွားတယ်နော်..ဆုဖလားကြီးနဲ့ပဲ... အားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာများ....အဆိုကတော့ ကောင်းပြီးသားဆိုတော့ ထူးပြောမနေတော့ပါဘူး.... အမြဲ အားပေးနေပါတယ်..သီချင်းတွေ ဆိုပါအုံးနော်...
cescy on Jul 31, 2010
ar pyae ' achitsone .thu yeae' alwan songs tway ko lar yout nar sinn twar par kaung .ta dinn kg par at par tal :D
yaryar on Jul 21, 2010
လာလည်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။ comment အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
maungkochit on Jul 6, 2010
:D bar kyi tone
kohtwe49 on Jun 10, 2010
minchit on Jun 9, 2010
I visited and listened to your one song.I'll visit & listen more your songs in future...
yotesoegyee on Apr 21, 2010
လာလည်သွားတယ်နော် . .
lumitekalay0 on Apr 19, 2010
joeyouke on Apr 18, 2010
mama ye' chit nyi ma lay..ACST lay lal..a thanayan kg par tal nor...mamaamyae arr pay nay mal nor......
moonko on Apr 16, 2010
youk ag lar khae par del song arr lone dot nar ma ht lite buu some louk pot kg del sis *****....5 stars ko de mhar tin pay lite p4all song pot naw.
katiesnow on Apr 13, 2010
HI sis, I come and visit and listened your channel.
WilliamNaing on Mar 10, 2010
လွမ်း !!! လာလည်သွားတယ်။ သီချင်းတွေလျှောက်ကြည့်ရင် လွမ်း ဆီကိုလမ်းမှားပြီးရောက်လာတာ။ သီချင်းတွေကိုတော့ နောက်မှ Comment တွေပေးမယ်နော်။ တတ်တာ.......
KoBurma on Feb 26, 2010
_________(,@@@@@@@),________________________________ ____(_,d@@@@Sb,d@@@@Sb____________________________ _____d@@@@@@/@@@@@@b_)__________________________ __(_@@@SP’”"‘`YSY`’”"‘”Y@@Sb___________________________ ____Y@@P.-’_____`______’-.Y@@b_)______________________ ___,_Y@P_(_(_(________)_)_)_d@Y_,_______________________ ____Y@b,__(o__)______(o__)_d@@P_______________________ ____`Y@S___’-'________’-'__`@Y`_________________________ ____, d/O\__________v_________/O\_b,_______________________ ______\__/’., _______~~______, .’\__/___________________________ _________.-`_____________`-._____________________________ ________/___, _d**b__d**b____\____________________________ _______/___/_*****bd*****`\___\____________________________ ______/___/_\__Y********Y___\___\__________________________ ______\___\____\__********____/__/__________________________ _______`\__`.__\_d*******b, _/\_\_/_____________________________ _________`.//.d**********b=_|_____________________________ ___________|/d************b/_____________________________ ___________d****************b__________________________ ________, _d**p”"q*****p”"q***b,__________________________ ________`”"‘`\_____”`|____/`’”"`______________________________ ______________`.____|===/________________________________ ________________>___|___|_______________________________ ________________/___|___|________________________________ _______________|____|___|________________________________ _______________|____Y__/________________________________ _______________\____/__/__________________________________ ________________|_/|_/____________________________________ _______________/_/_/_|____________________________________ ______________/=/__|=/____________________________________ _____________`”`___`”`____________________________________ ကိုKoBurma ဆီကို လာလည်ပြီး Comment ပေးသွားတာ ညလေးachitsonethu ကို ကျေးဇူးပါ .... သီချင်းအဆိုကောင်းလို့အရုပ်လက်ဆောင် ပေးသွားတယ် ... :):P:D
linlet00123 on Feb 22, 2010
naylynn on Feb 21, 2010
ဆိုထားထားလေးကောင်းတယ်နော် လာလည်သွားပါတယ်နော် နောက်လည်းအားပေးနေမယ် ဟဲ
maythitsar on Feb 20, 2010
ချစ်စရာလေးပါ ဒီဆိုဒ်လေးကိုလာလာချင်း ပထမဆုံးဘဲ တွေ.လို. လာလည်ပါတယ်ရှင့်
yetoe on Feb 12, 2010
သိချင်းလေးကအရမ်းနားထောင်လို့ ကောင်းတယ်သိလား နောက်လဲနအားပေးနေမယ်နော် ခံစားချက်တွေပါလားမသိဘူးသိချင်းလေးကအရမ်းကိုနားထောင်လို့ ကေင်းတယ်သိလား
kestrel on Feb 10, 2010
အရမ်းကောင်းတယ် ...ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ဆိုသွားတာ သဘောကျတယ်
arrkarheainzaw on Feb 5, 2010
သီချင်းလေးတွေက နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ် လာအားပေးသွားတယ်နော် ကလေးဆိုးလေး ဟဲဟဲ အသံက အဲ့ ဒီအသံနဲ့ တူနေလို့နောက်တာနော် ခင်လို့ခင်မင်လျှက် အာကာ
jaylay on Feb 1, 2010
အပိုတွေ ရေးသွားမယ် နော်။ ညီမလေး အသံက ချစ်စရာလေး၊ ဟိုအဆိုတော်နဲ. တော်တော်တူတယ် သိလား။joke
SKB on Feb 1, 2010
လည်လည် လာသွားပါတယ် ဘာမှလည်း မစားရဘူး အိမ်ရှင်က ဘာနဲ့ မှ လည်း ဧည့်မခံဘူး ဟွန်း သီချင်းတွေတော့ နားထောင်သွားတယ်နော် အိမ်ရှင်မရှိတုန်း အကုန်မွှေသွားတယ် ဟီးဟီး
sweetangel on Jan 30, 2010
အရမ်းကောင်းတာပဲ.. စတိုင်လေးက ချစ်စရာ .. ဆိုတာလည်း.. ကောင်း.. ညီမလေးရေ.. အားပေးနေမရ်နော..
suekko on Jan 28, 2010
ကလေးအသံလေးနဲ့ သီချင်းတွေကို ချစ်စရာကောင်းအောင် သီဆိုသွားတဲ့ ညီမရေ...အားပေးလျှက်ပါ
skywalker on Jan 24, 2010
lovercreater on Jan 17, 2010
chitpalone on Jan 15, 2010
ကူလွမ်းသွားတယ်နော်။ အားပေးနေပါတယ်။ အသစ်တွေမျှော်နေမယ်နော်။
snowrose on Jan 7, 2010
jktp on Dec 30, 2009
a yan good dal!!!
ZarMaung on Dec 27, 2009
ပူတူးတူးလေးရေ..လာလည်ပြီး..ထမင်းစားသွားပါတယ်.:P စတာ သီချင်းတွေ နားဆင် ခံစားသွားပါတယ်..ကောင်းလွန်းလို့ ဒီchannel လေးက မပြန်ချင်တော့ဘူး..h'h'......
khaki on Dec 27, 2009
very nice channel and nice vocalist.....i envy ur vocal
KTLin on Dec 24, 2009
လာလည်သွားပါတယ် ခင်ဗျ...အားပေးနေတယ်နော် ...များများဆို ... :)
LittleBird on Dec 22, 2009
lalaynge on Dec 22, 2009
ညီမလေးရေ.. အမကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် အက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်..။ သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့ ညီမလေးသီချင်းတွေ လာလည်ရင်းနဲ့ နားထောင်သွားပီ..။
chittatthu on Dec 20, 2009
ညီမလေးရေအစ်ကို့ကိုကွန့်မန့်ပေးသွား တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ညီမရေနောက်လည်းအားပေးပါအုံး..အစ်ကို အခုညီမသီချင်းကိုနားထောင်ကြည့်ပေး မယ်နော်...
hippo on Dec 20, 2009
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးရေ အလည်လာပြီး သီချင်းချိုချိုလေးတွေ နားထောင် သွားတယ်နော်။
Elvis on Dec 17, 2009
One Word, "Brilliant".
SIMON on Dec 15, 2009
sis yay .. sis songs lay tway lar arr payy twar tal .. pyan pee tot lal arr payy par own naw .. :D
kophone on Dec 11, 2009
ခုလိုလာအားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ... နောက်လည်းလာအားပေးပါဦး...
babylay on Dec 9, 2009
kg ma lay ka cute
ngenge09 on Dec 7, 2009
ညီမလေး၊ အသံကောင်းသလို အဆိုလည်းကောင်းပါ့။မမ က လီလီပာမ်းမာကလေ သိလား
dreambird on Dec 2, 2009
nyi ma voice lay ka kaung per tal.. MM mhar nay tae` ako toe ka top listen pe top pae` arr pay top mal nor,,,,,,,,,,
Zmg on Nov 30, 2009
singer lote par lar hin sis:))))))
thureinsoe on Nov 29, 2009
Heyachitsone thu yay, long time no see! thanks for voting for my vids!
kthetkawmu on Nov 16, 2009
ငါ့ ညီမ ဆိုထားတာတွေတော်တော် ကောင်းတယ် တကဲ့အဆိုတော်အတိုင်းပဲ သီချင်းတွေကို နားထောင်အားပေးသွားပါတယ်။ နောက်ကျမှလာလည်ရတဲ့အတွက် ခွင့်လွတ်နော်။
truth on Nov 14, 2009
the chin so tar taw tal naw arr pae par tal byar
booshootdie on Nov 13, 2009
accept me plzz
naymin15 on Nov 11, 2009
chu yae'''..happy birthday naww...ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါစေ.....
chawlay on Nov 10, 2009
hi you haveacute voice....
forevermoe on Nov 5, 2009
CHUUU YAYYYY..HAPPY BIRTHDAY PAR NOR ..MY LOVELY BABY SIS LAYY..D BD MHA SA PYI NOUT NIT POUNG MYAR SWAR PYAW SHWIN CHAN MYAE PAR SAY LO..MAMA SU TG PAY LITE TAL NOR ..:*
HEIN on Nov 5, 2009
thaku on Nov 4, 2009
I can`t read Burmese on my computer, I don`t know what you said but thanks u ...
akyinnarsonethu on Oct 31, 2009
sumaylay on Oct 30, 2009
sis lay yay..mama lar lal twar tal naw...athan lay ka lal nar htaung lo kg tha lo..lu lay ka lal..chit phot kg tal naw... :)
pp01 on Oct 28, 2009
Lovely cute chu.. really nice to listen your songs and nice to meet you to. Have fun!::D
thant on Oct 26, 2009
chu lay yay........ma ma lar lal thwar tal.......athan lay yaw lu lay yaw thate chit poet kg tal......
soramoe on Oct 23, 2009
achitsonethu so tae nyi ma yae - so taeathan ga cute tal lay -
name01 on Oct 20, 2009
အချစ်ဆုံးသူလေး လွမ်းနေတာလား :P
thetnyein on Oct 18, 2009
snowlover2010 on Oct 17, 2009
ayan kg tal byar ...
AngelLay on Oct 17, 2009
thu lay yay song dwe listen twar tal nor
yizaw on Oct 16, 2009
a yan kg par del
lawnar on Oct 16, 2009
yeaw is nice her in norway :-)
zawko49 on Oct 15, 2009
ကောင်မလေး နေရာ စုံအောင်တွေ့တယ်နော် ဘာတွေလုပ်နေလဲ
thazin on Oct 15, 2009
thanks for your sweet comments xD and ofcours i will singalot of songs :)
moesatangel on Oct 15, 2009
lar lal ta'atwat thz par sis lay
panshwe on Oct 13, 2009
ညီမလေးရေ လာပြီးဆုတောင်းပေးသွားတာကျေးဇူးနော်။ ဖတ်ပြီးတော့ မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားတယ် :) အစ်မလည်း ပြန်ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အသံပိုင်ရှင်ညီမလေး အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ :)
sunlight on Oct 9, 2009
I ko lal comment pay o lay !!!
ayepaw on Oct 4, 2009
kyay zu for comment par naw ma achit sone thu. ma achit sone thu go lel kyun naw ar pay nay bar del naw. myar g myar g so bar.
moeluu on Oct 4, 2009
You sings so well and all ur songs are nice to listen.. keep going!..I'll still tune.. Cheers!
phoekyaw on Oct 3, 2009
pioneer on Oct 2, 2009
ညီမရေ ...လာလည်သွားတယ်နော အားရင်ပြန်လာလည်ဦးလေနော့.... အစ်ကို့မွေးနေ့မှာ လာပြီးဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ
Phyogyi on Oct 1, 2009
sis's vocal is so cute...match with song.......I always listen your song.........
arkarphyolay09 on Sep 30, 2009
vote ပေးမလို. သီချင်းဆိုတာ ကောင်းလို.ဘယ်လိုပေးရမလဲ......
Waei_Phyo_82 on Sep 29, 2009
vocal is so good .......little sister..... sing many songs.......I wait to listen....to be continue walk around the online.......
whitekisslay on Sep 28, 2009
Nyi ma lay yay..yay lar visit twer par tal naw..song tay myar kyi so par ..voice layka so cute**:)
kalkallay on Sep 27, 2009
နိုဝင်ဘာနှင်းလေးရေ.... သီချင်းတွေအားလုံးကိုလာအားပေးသွားတယ်နော်။ အားလုံးအရမ်း good တယ်။ :) keep singing sis.
rocker on Sep 27, 2009
မဆိုးဘူး ညီမလေး..အဆိုတော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီးကြိုးစားရဦးမယ်..ချမ်းမြေ့ပါစေ..
acdc on Sep 27, 2009
ကောင်းလှချည်လားကွ....6***** ပေးတယ်ကွာ
ad1987 on Sep 27, 2009
အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ...ကြိုးစားကွာ..5***** ပေးတယ်
Nge_Lay88 on Sep 26, 2009
sis lal lal lar twar tal naw.song twae lae arr pay twar tal:)
zeekyat on Sep 25, 2009
fighter on Sep 25, 2009
ကောင်းပါတယ် သယ်ရင်းရေ .. အသံလေးက ကလေးလေးလိုပဲ .. ဒါပေမယ့် ကောင်းပါတယ်း)
yadanarlay on Sep 25, 2009
10 stars pay bae..a yan yan kaung lout :)
yesoe2009 on Sep 25, 2009
ညီမလေး အရမ်းကောင်းတယ်5stars ပေးမယ်နော်.... :P
poemm on Sep 25, 2009
စစ်လေး လာအားပေးသွားတယ်နော် အသံလေးက ချစ်စရာလေး.. <3
u4gyi on Sep 24, 2009
come n visit. your songs are so good Keep going
paradise on Sep 13, 2009
အလွမ်းတဲ.လား ချစ်စရာလေးနော် လူလေးရော နာမည်လေးရော အသံလေးရော ...နားဆင်သွားပါတယ်...ချစ်စရာအသံလေးနဲ.ကောင်မလေး များများဆက်ဆိုပါဦး
yeyintaung86 on Sep 4, 2009
ညီမလေး..အကိုလည်းလာလယ်သွားတယ် နော်...သီချင်းတွေလည်းနားထောင်သွားတယ် နော်..အားပေးနေပါတယ်.ဆက်ဆိုပါ..
htinkyaw23 on Aug 31, 2009
မြင်ဖူးမှာပေါ့ သူငယ်ချင်းက foreverfriend group ning ကမဟုတ်လား နာမည်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တော့မှ မှတ်မိသွားတာ လာလည်သွားတယ်နော် သူငယ်ချင်း
korain on Aug 30, 2009
ခုလို သတိတရ သီဆိုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ချစ်သူ။ ကိုယ်လဲ ချစ်သူအတွက် ပြန်ဆိုပေးထားတယ်နော်။
kglayngal on Aug 30, 2009
putu bal thuatwet soe htar tar lal hin :(
kounghtetsan on Aug 30, 2009
လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်.. သီချင်းလည်း နားထောင်သွားပါတယ်ဗျာ.. အရမ်းကောင်းလိုက်တာ.. အားပေးနေမယ်နော်.. ကောင်းထက်
Views: 3237 Duration :03:13
A Htee Kyan
Views: 2577 Duration :04:14
Views: 2478 Duration :03:54
May May Su Laint Mel
Views: 1956 Duration :03:38
Thu Thi Thwar Pi
thu thi twar p
Views: 1868 Duration :04:23
Achine Tine (1)
Views: 1695 Duration :02:49
Ma Sone Tae Phuu Sar
ma sone tae pu sar forget lite par :)\_\_r\_\_nmama doe bro doe ar pay kya par nor
Views: 1619 Duration :05:17
Views: 1477 Duration :05:47
Moe Thi Chin
Views: 1319 Duration :03:51
Kaung Kalay Thoe
Views: 1231 Duration :03:20
Achit Thoe Shone Naint Chinn
Views: 1218 Duration :03:41
Naut Shet Thu
Views: 1028 Duration :03:28
View All Recordings of achitsonethu